Tag: mobilada marka hore | Martech Zone
Tag: mobaylka marka hore
Khamiista, Febraayo 2, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waan ogahay inay tahay bisha Febraayo laakiin diyaar uma nihin inaan sii dayno xogta isbeddelka ee la saadaaliyay sannadkan soo socda. Cilmi-baaristaan ​​ku saabsan isbeddelada macaamiisha ee ka socda GlobalWebIndex ayaa ku wareegeysa labada nooc iyo baaxadda isbeddelada ku dhaca hab dhaqanka macaamiisha. Warbixinta 'Trends 17 Report' xitaa waxay ka digeysaa in sannadkan waxa loogu yeero burburka macnaha guud uu ka faafi karo baraha bulshada ugu weyn illaa barnaamijyada farriimaha lagu diro maadaama ay ku darayaan waxqabad - dadka isticmaalana ay joojiyaan ka qeyb qaadashada. Ku noqo 2012, celcelis ahaan
Suuqgeynta Dhaqdhaqaaqa: Ku wad Iibintaada 5taan Xeeladood
Jimcaha, Agoosto 7, 2015 Jimcaha, Agoosto 7, 2015 Douglas Karr
Dhamaadka sanadkan, in ka badan 80% dadka waaweyn ee Mareykanka ah waxay yeelan doonaan taleefan casri ah. Qalabka moobiilku wuxuu xukumaa labada B2B iyo B2C muuqaalkooduna wuxuu ku badan yahay suuq geynta. Wax kasta oo aan hadda sameyno waxay leeyihiin qayb mobilo ah oo ay tahay inaan ku darno xeeladaha suuqgeynta. Waa maxay Suuqgeynta Suuqgeynta Suuqgeynta moobiilku waa ku suuqgeynta ama aaladda mobilada, sida telefoonka casriga ah. Suuqgeynta moobiilku waxay macaamiisha siin kartaa waqti iyo goob